Sunday January 10, 2021 - 12:13:35 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya Mareykanka ayaa sheegaya in dadka Carona uu wadankaasi ku dilay ay kor udhaafeen 370 kun ruux American ah halka dadka uu soo ritay ay gaareen 22 malyan oo qof waana kiisaskii ugu badnaa ee caalamka laga diiwaan geliyo.
Jamaacadda caafimaadka Johns Hopkins ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa sheegtay in shalay ay Carona udhinteen 3456 qof American ah halka uu soo ritay dad ka badan 200,000 oo ruux.
Robert Redfield oo ah maamulaha xarunta ka hortagga iyo daweynta cudurrada dalka Mareykanka ayaa sheegay in saadaal ay sameeyeen ay muujinayso in Carona uu si maalinle ah udili doono 2500 illaa 5000 oo ruux isagoo walaac ka muujiyay in xaaladu faraha kasii baxdo inta lagu guda jiro bilaha Janaayo,Feberaayo iyo April.
Mas'uul sare oo katirsan wasaaradda caafimaadka Mareykanka ayaa warbaahinta u sheegay in xaaladda Carona ay aad usii xumaatay Lixdii bishaan xiligaas oo ay wadanka ka socdeen qulqulatooyin ka dhashay xoog ku geliddii taageerayaasha Trump ee dhismaha golaha Koongareeska.
Mareykanka ayaa kaalinta koowaad uga jira dalalka ladhiban caabuqa Covid19 marka loo eego kiisaska dhimashada iyo bukaanada.